ချဲလ်ဆီးနှင့် သူ၏ ချစ်သူများ: May 2008
ဘောလုံးလောကမှာ အခုတလေ စောင့်ကြည့်နေတဲ့ ချဲလ်ဆီးနည်းပြဟာ လက်ထောက်နည်းပြ ဖြစ်နေတဲ့ ဟန်တန်ကိတ် များဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ ဘယ်သူက ပြောရဲမှာလဲ။ အခုတော့ မိုဘစ်ခ်ျက ပြောရဲနေပါတယ်။ မြေထောင်မြှောက်တာလား ၊ မြေကြီးအောက် ပို့နေတာလား မသိဘူး။ ဆရာမိုဘစ်ခ်ျ ပိုက်ဆံမရှိတာတော့ မဟုတ်လောက်ပါဘူး ။ ဟီးဟီး။ ကဲ ချစ်စွာသော ချဲလ်ဆီးဖန်တို့ရေ သူနည်းပြ ဖြစ်လာတော့မယ်တဲ့နော်။ လာခြင်းကောင်းမှာပါဗျာ။ စိတ်ချ...စိတ်ချ။
သတင်းမှား ဖြစ်ပါသည်။း( တကယ်က ထုတ်ပစ်လိုက်တာပါတဲ့။ တော်တော် တော်တဲ့ ကျွန်တော်ပါ။ မှားပါဒယ် မိုဘီခ်ျရယ်။ သူလည်း ထွက်သွားပါပြီတဲ့။
Posted by ဆိုးသွမ်း at 6:52 AM No comments: Links to this post
မနေ့က ကန်သွားတဲ့ အင်္ဂလန် - အမေရိကန် ပွဲမှာ ချဲလ်ဆီး အသင်းခေါင်းဆောင် ( အင်္ဂလန် အသင်းခေါင်းဆောင် ) တယ်ရီ ခေါင်းတိုက် ဂိုးသွင်းယူ ခဲ့ပါတယ်။ ဒါကတော့ ဟိုက်လိုက်လေးပါ။ တယ်ရီဂိုး နဲ့ ဂျရတ်ဂိုးပါ။
Capello said: "The captain is John Terry. I decided before what happened [in the Champions League final].
"I think at this moment it isagood decision for John Terry after his not nice Wednesday."
"I think he is very well. He has trained very well and when I told him he was going to be the captain he was very, very happy."
"It is very important to bealeader and John Terry isaleader," he added.
ဟဟ...မြင်တဲ့ အတိုင်းပါပဲ ချဲလ်ဆီးဖန်တွေရေ ။ ဒန် တန် တန်
Posted by ဆိုးသွမ်း at 8:59 PM 1 comment: Links to this post
ကျွန်တော်တို့ နည်းပြ ဂရန့်ကြီးကတော့ ချဲလ်ဆီးနဲ့ လမ်းခွဲခဲ့ပြန်ပါပြီ။ ဆရာများ သားသေ သလိုတောင် ဖြစ်နေဦးမလား မသိတော့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ အတက်နိင်ဆုံးတော့ နည်းပြကောင်းတွေ ရရှိလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်မိပါတယ်။ ပိုင်ရှင်ကလည်း ပိုက်ဆံရှိတာကိုး :D ဟီးဟီး ။ နည်းပြက ဘာစီလိုနာက ရီကဒ်ကြီး ခေါ်ရင်တော့ ကောင်းမယ်ထင်တယ်ဗျာ။ အခုလည်း ဘရာဇီးသား ရော်ဘင်ဟို နဲ့ စပါးတပ်စ်မော်စကိုက နောက်တန်းတစ်ယောက်ကို ခေါ်မယ်လို့လည်း သတင်းကြားနေရပါတယ်။ ဒီနောက်ခံလူက ညာဝန်းလို့ ကစားလို့ရပါတယ်တဲ့။ ဒါပေမယ့် ဘို့စင်ဝါးကို ခေါ်ထားလို့ ဒီကစားသမားကတော့ မသေချာပါဘူး။ ဘာပဲ ပြောပြော ကျွန်တော်တို့ကတော့ ချဲလ်ဆီးပဲပေ့ါ။ မဟုတ်ဘူးလား...ချဲလ်ဆီး ချစ်သူတို့ရော။ ကဲ...ဂရန့်ကြီးအတွက် နုတ်ဆက်လိုက်တာကြတာပေ့ါဗျာ။ အဆင်ပြေပါစေ ဂရန့်ရေ.....။
Posted by ဆိုးသွမ်း at 6:15 PM2comments: Links to this post
ချဲလ်ဆီးကွင်းလယ်စတား လမ်းပတ်၏ သက်တမ်းတိုးစာချုပ်အတွက် အင်္ဂလန်ချစ်ကြည်ရေးပွဲ နှစ်ပွဲပြီးရင် အသင်းကနေပြီး သေသေခြာခြာ ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ပါတော့မယ် .. သက်တန်း တစ်နှစ်သာကျန်တဲ့ လမ်းပတ်ကို အင်တာမီလန်အသင်းကလည်း စိတ်ဝင်စားနေပါတယ် .. chairman ဘရုစ်ဘတ်ကတော့ " အသင်းက လမ်းပတ်ကိုနှစ်သက်ပါတယ်၊ ပရိတ်သတ်တွေကလည်း ချစ်နေကြဆဲပါပဲ " အကောင်းဆုံး အဖြေရလဒ်တစ်ခု ဖြစ်လာမှာပါတဲ့ .. လမ်းပတ် အသင်းမှာဆက်ရှိနေဖြစ်ရင်တော့ ၀မ်းသာစရာတစ်ခုပါပဲ ..... ။
Posted by OK at 9:40 PM No comments: Links to this post
ချယ်လ်ဆီး ဆိုတာ ကံကောင်း တတ်လှတဲ့ အသင်းတော့ မဟုတ်ဘူး ဆိုတာ ...
ဟိုး ... ဗီရာလီ တို့လက်ထက် ကတည်းက သိပြီးသားပါပဲ ...
ချယ်လ်ဆီး ဆိုတာ ဖလားတွေ အများကြီးကို ပိုင်ဆိုင်ဖူးတဲ့ အသင်းကြီး ...
မဟုတ်မှန်းလဲ ... အစကတည်းက သိခဲ့ပြီးသား ပါပဲ ...
ချယ်လ်ဆီး ဆိုတာ သမိုင်းမှာ အောင်မြင်မှုတွေ ရေးထိုးနိုင်အောင် ...
ကြိုးစားနေဆဲ ... အသင်းတစ်ခု ဆိုတာလဲ သိပြီးသားပါပဲ..
ဒါပေမယ့် အပြာရောင်ကို ချစ်တယ်
.. .. .. အားမာန်တွေကို အားကျတယ်
.. .. .. ကြိုးစားမှုတွေကို လေးစားတယ်
.. .. .. ၀ီရိယတွေကို တန်ဖိုးထားတယ်
အောင်မြင်မှုတွေကို ပါကင်ထုတ်ပြီးသား မလိုချင်ဘူး ...
ပွင့်ဖူးလာဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ ပန်းကလေးကို
ပိုင်ဆိုင်မှုထက် ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရဖို့ 
ကြိုးစား နေရတာကို ပိုကျေနပ်မိတယ်..
ဒါတွေဟာ ချယ်လ်ဆီး ရဲ့ စိတ်ဓါတ် တွေလား..
ချယ်လ်ဆီး ဟာ ကျွန်တော့်ရဲ့အားမာန်တွေလား.
ချယ်လ်ဆီး ဟာ ကျွန်တော်တို့
ကျွန်တော်တို့ ဟာ ... ချယ်လ်ဆီး ပဲပေါ့ ဗျာ ...
ကိုဝင်းဆန်း ရေးဖွဲ့သော Chelsea & Me ကို ကူးယူ၍ ပြန်လည် ပြုပြင် တင်ပြပါသည်။
Posted by စိုးထက် - Soe Htet ! at 1:16 PM 8 comments: Links to this post
တက်သမျှ မှတ်သမျှ ဂါထာတွေ ဘယ်နှစ်ခေါက်ရှိမှန်းတောင်မသိခဲ့
အနီရောင်တွေ ခြေထဲ ဘောလုံးရှိနေတိုင်း
ပင့်သက်ကို ရင်တမမနဲ့ ရှိုက်ထုတ်နေခဲ့ရတယ်
ဒီဒိုင်ပါပဲ ချဲလ်ဆီးကို လီဗာပူးလ်နဲ့ မ၀င်တဲ့ဂိုးကို ပေးခဲ့တာ
ကံကြမ္မာကိုက ချဲလ်ဆီးအတွက် ကံဆိုးဖို့ ဖြစ်လာစေခဲ့တာလား
မပေးသင့်တဲ့ ပြစ်ဒဏ် ၊ လွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ် ဘောလုံးတွေကိုမှ
အိမ်ပြန်လက်ဆောင်အတွက် ဒရော့ဘာကိုတောင် အနီပြခဲ့သေးတယ်
ရော်နယ်လ်ဒိုရဲ့ မထီမဲ့မြင် အပြုံးမှာ
ကျွန်တော့် မျှော်လင့်ချက်တွေ ချုပ်ငြိမ်းခဲ့ရတယ်
ကျွန်တော့် အသံတွေ တိတ်ဆိတ်ခဲ့ရတယ်
အက်ဆီယန်ကို နောက်တန်းထားတဲ့ အမှားက
ပြင်မရတဲ့ နောင်တတွေပေ့ါ ဂရန့်ရယ်
တိုင်တွေ အကြိမ်ကြိမ်ထိ ၊ ပြစ်ဒဏ်ဘောတွေ အကြိမ်ကြိမ်ပေးခံရရင်း
ကိုလမ်းပတ် ကယ်ယူခဲ့တဲ့ ဂိုးမှာ
အသင်းခေါင်းဆောင် ပီပီ ၊ ကိုယ်တိုင် နောက်ဆုံးသွင်းယူချင်ခဲ့တဲ့ ဂိုးမှာ
မော်စကိုရဲ့ မိုးညမှာ ခင်ဗျားနဲ့အတူ ကျွန်တော်ငိုတယ်...တယ်ရီ
ခင်ဗျားနဲ့အတူ ချဲလ်ဆီးချစ်တဲ့ ပရိတ်သက်တွေ
ဒီမြစ်ကို ကျွန်တော် လက်ပစ်ကူးပစ်မယ်
သိက္ခာရှိရှိ ခြေစွမ်းတွေ ပြခဲ့ပေမယ့်
ဒီတခါ မရလည်း ၊ နောင်တစ်ခါတော့ ပြန်ဖြစ်လာဦးမှာပေ့ါ
ခင်ဗျားနဲ့အတူ အသင်းသားတွေ အားလုံးလည်း
Posted by ဆိုးသွမ်း at 5:45 PM4comments: Links to this post
အလယ်တန်း - အကာလူး ၊ ဂျိုကိုးလ် ၊ လမ်းပတ် ၊ ဘောလက် ၊ မက်ခေလီလီ
နောက်တန်း - ၀ိန်းဘရစ်ခ်ျ ၊ ကာဗယ်လ်ဟို ၊ တယ်ရီ ၊ အက်ဆီယန်
ကဲ...ရင်ခုန်ကြမယ် ၊ ပျော်ရွှင်ကြမယ်ဗျို့။
Posted by ဆိုးသွမ်း at 2:14 PM No comments: Links to this post
ပီတာဆက်ခ်ျ ၊ ကျွန်တော် ၊ ကူဒီစီနီ :P
Posted by ဆိုးသွမ်း at 1:18 AM2comments: Links to this post
CEO ( ပီတာကင်ယွန် )
ဦးဒရော့တို့ကတော့ ဒီလို လေ့ကျင်နေကြလေရဲ့
ဂိုးသွင်းကောင်းတယ်...ဂိုးသွင်းကောင်းတဲ့ တို့မာလူဒါပါး)
Posted by ဆိုးသွမ်း at 12:28 AM2comments: Links to this post
Posted by Soe Mya Nandar Thet Lwin (Borros Roxo) at 5:40 PM No comments: Links to this post
ဒါကတော့ ပေါ်တင်ကြီးကို ဖောင်းသွားပြီ။ ကျွန်တော်နာမည်နဲ့ ပေါက်ကရတွေ ၀င်ရေးသွားတယ်။ စီဘောက်စ် ပက်စ်ဝေါ့လည်း သိစရာ အကြောင်းကို မရှိဘူး။ ၁၅ လုံးလောက်ရှိတယ်။ ပက်စ်တစ်ခုတည်းကို နစ်ရော ဘလော့ဂ်ရော အကုန်သုံးတယ်။ အခုလို လုပ်တာတော့ မကောင်းဘူးပေါ့ဗျာ။ ကိုယ့်စိတ်ဓတ် အခြေအနေကို ကိုယ်ဖော်ပြနေသလိုပဲ။ အခုလာ အော်တဲ့ အိုင်ပီနံပတ်က 38.100.42.25 ပါတဲ့ ယူအက်စ်ကပါ ။ ဒီနေရာမှာ ကြည့်ကြည့်ပါ။ Proxy ကျော်ထားရင်တော့ တစ်မျိုးပေ့ါ။ ကျွန်တော်ထင်တာတော့ စင်္ကာပူကလို့ ထင်ပါတယ်။ အော်...လူတွေ လူတွေ အချင်းချင်းတောင် ရန်တိုက်ပေးနေတယ်။ ကိုယ့်လုပ်ရပ်အတွက် ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာပဲ သိတယ်။ ဘယ်လို ရှိတယ်ဆိုတာ။ ကိုစိုးထက်ကို တိုက်ခိုက်လိုက် ၊ ကျွန်တော့်ကို တိုက်ခိုက်လိုက်နဲ့ ။ ကျွန်တော် ဒီလို ပေါက်ကရတွေလည်း မရေးပါဘူး။ သိက္ခာရှိရှိပေ့ါဗျာ။ ကိုယ့်ကိုယ်စောင့် နတ် ကသိပါတယ်။ ၀ဋ္ဋ်မလည်အောင်တော့ ဆုတောင်းထားကြ။ အမှောင်ထဲကနေ လက်ညိုးထိုးနေတဲ့ သူတွေအတွက် ရှက်တက်ရင် ရှက်ဖို့ကောင်းတယ်။
PS . မနန္ဒာရေ ။ ဒီလောက်ဆို သဘောပေါက်ပါတယ်နော်။ ကျွန်တော်တို့ ချဲလ်ဆီးဖန်တွေ ကြားမှာ စိတ်ကွပ် စရာ ဘာအကြောင်းမှ မရှိပါဘူး။ အောင်မြင်နေလို့ လာအော်ဟစ်နေကြတာပါ။ ဟားဟ ။
Posted by ဆိုးသွမ်း at 2:25 PM 1 comment: Links to this post
ကဲ...ဒါကတော့ ဒီရာသီရဲ့ ပထမဆုံး ၀ယ်ယူတဲ့ ချဲလ်ဆီးကစားသမားဖြစ်တဲ့ ဂျို့စ်ဘောက်ဆင်းဝါ ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိ ပေါ်တိုကလပ်မှ ပြောင်းလာပြီးတော့ ပေါ်တူဂီ လက်ရွေးစင်တစ်ဦးပါ။ ပြောင်းရွှေ့ကြေး ၂၀.၅ သန်းဆိုလား ပေးရပါတယ်။ အကြောင်းစုံ သိချင်ရင် ဒီမှာ သွားရောက်ဖက်ရှုနိင်ပါသည် ချဲလ်ဆီးဖန်တွေ ခင်ဗျာ။
( Defender - Right Back )
Full Name: José Bosingwa da Silva
Date of Birth: 24-08-1982
Height (Mts): 1.83
Goal By Bosingwa
ပျော်ရွှင်ပါစေ...ချဲလ်ဆီးဖန်တွေရေ။ ဖာရဲရားနဲ့ ဘလက်တီနဲ့ကတော့ တစ်ယောက်ယောက် ထွက်ရမယ်နဲ့ တူပါတယ်။း(
Posted by ဆိုးသွမ်း at 1:23 AM No comments: Links to this post
မေလ ၂၁ ရက်နေ့တွင် ရုရှားနိင်ငံ မော်စကိုတွင် ကျင်းပမည့် ချန်ပီယံလိဂ်ဗိုလ်လုပွဲမတိုင်မီ အီဘရာမိုဘစ်ခ်ျ၏ စီစဉ်မှုကြောင့် ချဲလ်ဆီး ချစ်သူ ဘလော့ဂ်များနှင့် မန်ယူအသင်းတို့ ခြေစမ်းရန်အလို့ငှာ လူစာရင်းကို အောက်ပါ အတိုင်း line up ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ ချဲလ်ဆီးချစ်သူ ဘလော့ဂ်ဂါများမှ ပါဝင်ကစားကြမည့် သူများကတော့ .......
နည်းပြ - မလားရှိုးသူ
လက်ထောက် အကူနည်းပြ - မစိုးမြနန္ဒသက်လွင်
လက်ထောက် အကူနည်းပြ - မသိုးမလေး
အသင်းဆရာဝန် - မမိုးချစ်သူ
နည်းစနစ် တာဝန်ခံ - မမေ ၊ မဆုရည်
အရန်ကစားသမားများကတော့ လူငယ်ခြေတက်များ ဖြစ်တဲ့
ရှေ့တန်း - wynnsun
အလယ်တန်း - ၀ဿန်ဦး ၊ အိမ်မက်သစ်
နောက်တန်း - ဗဟုသုတရွာ
တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကတော့ လာမဲ့ ချန်ပီယံလိဂ် မတိုင်မီ မန်ယူနှင့် ခြေစမ်းမည့် ချဲလ်ဆီးချစ်သူ ဘလော့ဂ်ဂါများ ဖြစ်ပါတယ်။ ခြေစမ်းပွဲကို မေလ ၁၇ရက်နေ့တွင် တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့် သွားမှာ ဖြစ်ပါကြောင်း သတင်းကောင်း ပါးအပ် ပါသည်။ ကဲ....ကျွန်တော်ကတော့ ထရိန်နင် ဆင်းပါပြီ။ :)
တချက်ပြုံးရင် တရက် အသက်ပိုရှည်မှာပါ။ စိတ်၏ ချမ်းသာခြင်း ကိုယ်၏ ကျန်းမာခြင်းနှင့် ပြည့်စုံနိင်ပါစေ။
Posted by ဆိုးသွမ်း at 8:43 PM 10 comments: Links to this post
လမ်းပတ် - ၁၀ ဂိုး
အနယ်လ်ကာ - ၁၀ ဂိုး
ဒရော့ဘာ - ၈ ဂိုး
ဘောလက် - ၇ ဂိုး
အကာလူး - ၇ ဂိုး
ဂျိုကိုးလ် - ၇ ဂိုး
အက်ဆီယန် - ၆ ဂိုး
ရှက်ချန်ကို - ၅ ဂိုး
ဘလက်တီ - ၂ ဂိုး
အဲလက်စ် - ၂ ဂိုး
မာလူဒါ - ၂ ဂိုး
ရိုက်ဖီးလစ် - ၂ ဂိုး
ပီဇာရို - ၂ ဂိုး
ကာဗယ်လ်ဟို - ၁ ဂိုး
အက်ရ်ှလေးကိုး - ၁ ဂိုး
တယ်ရီ - ၁ ဂိုး
ဂျိုကိုးလ် - ၂၄၈၉ မိနစ်
အက်ရ်ှလေကိုး - ၂၄၁၇ မိနစ်
ပီတာဆက်ခ်ျ - ၂၃၁၄ မိနစ်
အိမ်ကွင်း - ၁၂ ပွဲ
အဝေးကွင်း - ၁၃ ပွဲ
အိမ်ကွင်း - ၇ ပွဲ
အဝေးကွင်း - ၃ ပွဲ
အိမ်ကွင်း - မရှိ
+၆၅ / -၂၆
အ၀ါကဒ် ၊ အနီကဒ်အများဆုံး ရသူများ စာရင်း
ဒရော့ဘာ ( အနီ - ၁ ၊ အ၀ါ ၆ )
အက်ဆီယန် ( အနီ - ၁ ၊ အ၀ါ ၅ )
ကာဗယ်လ်ဟို ( အနီ - ၁ ၊ အ၀ါ ၅ )
လမ်းပတ် ( အနီ - ၁ ၊ အ၀ါ ၅ )
ဂျိုကိုးလ် ( အ၀ါ ၆ )
မီခေးလ် ( အနီ ၁ ၊ အ၀ါ ၄ )
Cup Winner`s Cup - 4
၀င်ဆန့်သည့် လူဦးရေ- ( ၄၂၀၅၅ )
Posted by ဆိုးသွမ်း at 1:12 PM No comments: Links to this post
Player of the Year 2008 - Joe Cole ( From Chelsea Clup )
Brad Friedel ( Blackburn )
Nyron Nosworthy ( Sunderland )
Joleon Lescott ( Everton )
Ricardo Carvalho ( Chelsea )
John Terry ( Chelsea )
David Bentley ( Blackburn )
Frank Lampard ( Chelsea )
Wayne Rooney ( Mancherster United )
Cristiano Ronaldo ( Manchester United )
Posted by ဆိုးသွမ်း at 12:54 PM No comments: Links to this post
ကြားထဲမှာ ၁၀ ရက်လောက် အချိန်ရတဲ့ အတွက် ပြန်ကန်နိင်မှာပါ။ အဆစ်လေး လွဲသွားရုံလေးပါပဲတဲ့ ။ ဘောလ်တန်က ဖြက်တင်ဘောကို ဒါးဗီးစ် ၊ ပီတာဆက်ခ်ျ ၊ တယ်ရီတို့ ခုန်အတိုက်မှာ ပီတာဆက်ခ်ျဒူးနဲ့ ဗိုက်ကိုဆောင့်မိတာရယ် ၊ လက်ကလည်း ညှက်သွားတာ ကြောင့်ပါ။ အေးအေးဆေးဆေး ကန်နိင်မှာ ဖြစ်ပါကြောင်း ဗိုလ်လုပွဲကို မှန်းမျှော်လို့ နိးဆော်လိုက်ရပါတယ်။
Posted by ဆိုးသွမ်း at 12:08 PM No comments: Links to this post
Posted by ဆိုးသွမ်း at 12:29 AM2comments: Links to this post
မန်ယူပွဲက ၂ ဂိုးဆိုတာ နဲ့ ကျွန်တော်တို့ ချဲလ်ဆီး ကစားသမားတွေလည်း စိတ်ဓတ်ကျသွားတယ်နဲ့ တူပါတယ် ။ မျက်နှာငယ်လေးနဲ့ ဘောလ်တန်ကို တန်းဆင်းခိုင်းရမှာလည်း သနားလို့နဲ့ တူပါတယ် သရေပြန်ဖြစ်သွားအောင် လျော့ကန်သွားတယ်။ ဒီသရေ ပွဲကြောင့် ဒင်းလည်း ပရီးမီးယားလိဂ် ဆက်ရှိနိင်တာ မဟုတ်လား ။ ကဲ...ချန်ပီယံလိဂ်ကိုပဲ မျှော်ကြတာပေ့ါဗျာ။
Chelsea 1 : 1 Bolton
1st Goal by Shevchenko
2nd Goal by Taylor
Posted by ဆိုးသွမ်း at 11:59 PM No comments: Links to this post
အမိမြန်မာပြည် နာဂစ်မုန်တိုင်း အတိုက်ခံလိုက် ရတာနဲ့ လူလည်း ဘောလုံးပွဲတောင် စိတ်မပါတော့ပါဘူးဗျာ။ ဘာမှကို လုပ်ချင် ကိုင်ချင် စိတ်မရှိတော့ပါဘူး ။ ထုံးစံအရသာ နောက်ဆုံးပွဲ အနေနဲ့သာ ရေးရပေမယ့် စိတ်ထဲက မပါတာတော့ အမှန်ပါပဲ။ ချဲလ်ဆီးရလည်း အော် ရသွားတယ် ၊ မန်ယူရလည်း ရသွားတယ်လေ ဆိုတာလောက်ပဲ ခံယူချင်တော့တယ်။ အော် နာဂစ် နာဂစ်.....
အလယ်တန်း - အနယ်လ်ကာ ၊ လမ်းပတ် ၊ ဘောလက် ၊ ဂျိုကိုးလ် ၊ မီခေးလ်
နောက်တန်း - ဖာရဲရား ၊ တယ်ရီ ၊ ဘင်တယ်ဟိန်း ၊ အက်ရ်ှလေးကိုးလ်
ဂိုးခန့်မှန်း - ၂းဝ ၊ ၃းဝ
အိမ်ကွင်းလည်း ဖြစ်ပြန် ၊ နောက်ဆုံးပွဲလည်း ဖြစ်တာကြောင့် အပိုင်အုပ်တော့မယ်ဗျာ။ ၀ီဂန်ကို သရက်သီးတွေ သရေလောက်ပဲ ကန်နိင်မှာပါ။ နိ့..အခု ၀ီဂန်ဂိုးက တအားကောင်းတာကိုးဗျ။ ရွန်းနီမပါတော့ ဟန်ဆောင်ကောင် ငဒိုလည်း ဘာမှ မလုပ်တက်ပါဘူး။ ကွင်းအစုတ်မှာ ဒင်းအပြုတ်ပဲပေ့ါ။ ဟဲဟဲ။ ကဲ အောင်မြင်ပါစေ ချဲလ်ဆီးဖန်တွေရေ။ ချဲလ်ဆီးအောင်ပွဲက နစ်သိမ့်ပေးနိင်ပါလိ့မ်မယ်။
Posted by ဆိုးသွမ်း at 3:46 AM 1 comment: Links to this post